कालि’ञ्चोक भगवतीको’ दर्शन गरि’ कार्तिक २७ गते/ नोभेम्वर १२ बिहिबारतपाईंको राशिफल कस्तो छ हेर्नुस – Krazy NepaL
November 12, 2020 563
आजको राशिफल बि.सं.२०७७ साल कार्तिक २७ गते बिहिबा”र ई. सं. २०२० नोभेम्वर १२ नेपाल सम्बत ११४० कौलागा द्धादशी, प्रमाधि नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, कार्तिक कृष्ण द्धादशी , चन्द्रमा कन्या राशिमा, हस्ता नक्षत्र, विषकुम्भ योग, कौलव करण । नेपालमा” सूर्योदय बिहान ०६ः२३ बजे, सूर्यास्त” साँझ ५ः१४ बजे हुनेछ । आज जन्म लिने बच्चाको कन्या राशि हुनेछ । आज महत्वपूर्ण कार्यका लागि बाहिर निस्कनु पर्दा दही खाएर जुनसकै दिशाको यात्रा गरेपनि शुभ फल प्राप्त हुनेछ । आज कुनैपनि महत्वपूर्ण कार्य तथा दिवश “परेको छैन । आज कुनै महत्वपूर्ण कार्यको शुरुवात वा शुभ यात्रामा निस्कन आजका लागि शुभ समय बिहान ६ बजरे २२ मिनेट देखि ७ बजेर ४४ मिनेट सम्म छ । यो समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँ अनुसार”” समय, तिथि, नक्षत्र, ईत्यादीमा पनि अन्तर हुनेछ ।
सत्रुहरुलाई किनारा” लगाउदै चाहेको उपलब्धि” हासिल गर्न सकिनेछ । अध्ययन अध्यापनमा मन जाने हुनाले अरु दिन भन्दा खटेर काम गर्न सकिनेछ । माया प्रेमको गाठो कसिलो भएर जानेछ भने नजिकका मित्रहरुवाट सहयोग पाईने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । कुटुम्ब तथा मावली पक्षबाट काममा सहयोग पाईनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउने योग रहेकोछ ।
व्यापार व्यावसायमा “लगानि गरिहाल्ने समय नरहेकोले तत्काल नयाँ काम”” नगर्नु नै राम्रो रहनेछ । भौतिक सम्पति तथा सवारि साधनको “प्रयोग तथा परिचालन गर्दा ख्याल गर्नुहोला अप्रिय घटना नहोला भन्न सकिन्न । आत्मिय मित्र तथा परिवारका साथ रहेर स्वादिष्ट भोजनको टेष्ट लिने अवसर जुर्ने भएपनि खानपानको तालमेल नमिल्दा सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउँन सक्छ ध्यान दिनुहोला ।
खोज तथा “अनुशन्धानको क्षेत्रमा “प्रशस्त समय खर्चिय पनि” भनेजस्तो नतिजा हात नलाग्न सक्छ । घर परिवार,आफन्त तथा आमासँग घरायसि कुरामा बिवाद सिर्जना हुँन सक्छ ध्यान दिनुहोला । माया प्रेम तथा पति पत्निबिच “सामान्य मनमुटाव बढ्ने योग रहेकोछ ध्यान दिनुहोला । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा समय लगानि गर्नेहरुले मनग्गे आम्दानि गर्न सक्नेछन् ।
छोटो दुरिको व्यावसायिक यात्राको तय हुनेछ भने यात्राका क्रममा “साथिभाई सँग रमाईलो गर्दै “दिनलाई रंगिन बनाउँन सकिनेछ । आफन्त तथा निकट सम्बन्ध भएका मानिससँग छुट्टिनुपर्दा मन खिन्न रहनेछ । आफु भन्दा ठुला मानिसको सुझाब तथा सल्लाह लिएर अगाडि बढ्न सके गन्तब्यमा पुग्न सहज हुनेछ ।
समाजसेवा तथा’ राजनिति गर्नेहरुले जनताबाट अपमान तथा आलोचना “सहनु पर्नेहुँदा काम गर्दा अलि “बडि ख्याल गर्नुहोला । निति निर्माण तहमा तपाईको सहभागिताले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने भएपनि आफ्नै साथिहरुको आलोचना खप्नु पर्नेछ । लामो धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सचेत हुनुहोला डकुमेन्ट नमिलेर झन्झट बेहोर्नु पर्ला ।
आफन्त” तथा शुभ”चिन्तकहरुको सल्लाह त”था शुझाबलाई बेवास्ता गर्दा दुख पाईनेछ । व्यापार व्यावसायमा मन्दि आउने हुनाले आर्थिक रुपमा पछाडि परिनेछ । स्थाई सम्पतीमा बिवाद आउने योग रहेकोछ भने भौतिक सम्पति तथा अन्य साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला । दिदि बहिनी तथा आफन्त सँग अनाबस्यक बिवाद हुन सक्छ ।
मनपरेको भौ”तिक बस्तु तथा बिलाशि बस्तुहरुको प्रयोग गर्न पाईने हुँदा मन प्रफुल्लित हुनेछ । व्यापारको शिलशिलामा लामो दुरियो उ”पलब्धि”मुलक यात्राको” तय गर्न सकिनेछ भने” व्यापार बिस्तार “गरि मनग्गे आम्दानि गर्न “सकिनेछ । जीवनसाथि तथा आफ्नो बिषेश मानिसको” सहयोगले आम्दानिको दायरा “बढाउँन सकिनेछ । अध्ययन तथा अध्यापनमा तपाईले” गरेको लगानिबाट सार्थक नतिजा आउँनाले मन प्रशन्न हुनेछ ।
Prev“मलेसिया’मा नेपाली’ युबाले छुरा प्रहा’र गरि नेपा’ली युवति’को हत्या”
Nextकालि’ञ्चोक भगवतीको’ दर्शन गरि’ “कार्तिक २७ गते/ नोभेम्वर १२ बिहिबार “तपाईंको राशिफल कस्तो छ हेर्नुस”